Faahfaahinta qarax lala eegtay Amisom iyo rasas ay ku fureen dad Shacab ah. | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Faahfaahinta qarax lala eegtay Amisom iyo rasas ay ku fureen dad Shacab...
Faahfaahinta qarax lala eegtay Amisom iyo rasas ay ku fureen dad Shacab ah.
Warar laga helayao goobta uu saakay qarax ka dhacaya ayaa tilmaamaya in Kolonyo Gaadiid ah oo ay la socdeen Ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM qarax Miino lagula eegtay agagaarka Masjidka Turkiga oo ku yaalla wadada u dhaxeysa Isgoyska Fagax & xaafada Jamhuuriya ee degmada Kaaraan.
Ciidamada qaraxa lala eegtay ayaa waxaa la sheegay inay sahay ama raashin u wadeen Ciidamo kale oo ka tirsan AMISOM oo ku sugan degmada Hurwaa ee Gobolka banaadir, waxaana qaraxa kadib ay ciidamada fureen rasaas farabadan.
Dhinaca kale Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in rasaas farabadan oo ay fureen Ciidamada AMISOM ay ku geeriyoodeen wade Gaari Dameer, Haweeneey ay rasaasta ugu tagtay Hooygeeda halka ay ku dhaawacmeen 6 ruux oo kale oo Shacab ahaa.
Ciidamada AMISOM ayaa qaraxa kaddib muddo saacado ah oo wadada u xirneyd ay iska sii wateen socdaalkooda, waxaana weli la xaqiijin khasaaraha dhankooda kasoo gaaray qaraxa.
Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa marin u aheyd wadada jaayga ah ee agmarta Masjidka Turkiga EE ee Xaafada Jamhuuriya maadaama Biyo farabadan xireen wadada laamiga ah ee marta Isgoyska Fagax.
Maqaal horeShil Gaari oo ka dhacay Deegaanada Somaliland
Maqaal XigaDagaal ka dhacay qeybo ka mid ah Gobolka Shabeeladda Hoose .